Naya Post Nepal | टिपरको ठक्करबाट ज्यान गएको दुई बालिकालाई,पढाउने शिक्षक भावुक हुदै यस्तो भने (भिडियो हेर्नुस्)
टिपरको ठक्करबाट ज्यान गएको दुई बालिकालाई,पढाउने शिक्षक भावुक हुदै यस्तो भने (भिडियो हेर्नुस्)
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १ सुन्दरीजल नजिकैको मेलम्ची चोकमा नि’कै दुख ला’ग्दो घ टना घटेको छ ।मेलम्ची चोकबाट करिब ५०० मिटर भित्र टि’परको ठ’क्करबाट स्कुल जाँदै गरेका दुई बालिकाको मृ त्यु भएको छ ।
स्थानीय रोहन घिसिङको छोरी श्रीष्टी घिसिङ र श्रेया घिसिङको घ टनास्थलमै मृ त्यु भएको छ ।बुबासँग मोटरसाइकलमा स्कुल जाँदै गर्दा टिपरले ठ”क्कर दिएको थियो ।बुबा रोहनको पनि अ वस्था निकै ग”म्भीर छ र उनी हस्पिटलमा आई सि यु मा उप चाररत छन् ।
ठक्करबाट ठाउँको ठाउँमै अन्य दुई बालिका भने जोगिन नस क्दा मृ त्यु भएको हो ।स्थानीयको अनुसार टि’परलाई प’छाडि सार्दै गर्दा बाइकसँग ठ”क्कर हुन पुगेको र घ टना भएको कुरा बताएका छन् ।
यो पनि ,, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले नवनियुक्त तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजि त एक समारोहबीच उनीहरुलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको हो । गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तर निर्णयाबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका बसन्तकुमार पन्त,
धिरज प्रताप सिंह र रबिन्द्र बहादुर धानुकलाई प्रहरी महा निरीक्षक क्षेत्रीले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजीलाई बिहीबार एआईजीको फुली ल गाउन जति हतार भयो, त्यो भन्दा बढी भ्याइनभ्याइ बढुवा हुन नपाएका अरु तीन डीआईजीलाई थियो।
सरकारले बिहान मात्रै तीन डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अरुबेला सरकारको निर्णय तीन दिन सम्म पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्दैन। यिनै तीन एआईजीको दरबन्दी थपको निर्णय पुग्न पनि हप्तौँ लाग्यो। तर, यसपटक बिहान सरकारले निर्णय गर्यो।
दिउँसो उनीहरुलाई दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिने कार्यक्रम तय भयो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआईजीको फुली लगाइदिने तरखर गर्दैगर्दा तीन डीआईजी भने सर्वोच्च अ दालतमा थिए। डीआईजीहरु वसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताप सिं ह र रवीन्द्रबहादुर धानुक एआईजीको फूली लगाउने
तरखरमा लाग्दा पन्तकै ब्याचीहरु ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्की त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे का थिए एआईजी बढुवा भएका सिंह र धानुक उनीहरुभन्दा प छिल्लो ब्याचका हुन्। आफूहरुलाई नगरी कनिष्ठलाई एआईजी बनाउन लागिएको भन्दै उनीहरुले यसअघि सिफारिस विरुद्ध नै उनुरी गरेका थिए।
तर उनीहरुको उजुरी सुनुवाइ समितिले सुनेन। बढुवा सिफारिस अगाडि बढाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएपछि उनीहरु सर्वो च्च पुगेका हुन्। उनीहरुले बिहान कार्यालय खुल्नासाथ लोकसे वा आयोग पुगेर आफ्नो उजुरी उपर भएको कारबाहीबारे लिखि त जानकारी लिए। त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चमा उनको रिट आगामी आइतबारलाई पेसी तोकिएको छ।
डीआईजी कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूहरुलाई ‘रातो कार्ड दिएर मैदानमै बस्न नदिने’ कोसिस गरिएको बताएका छन्।
कार्कीले लेखेका छन्ः
धेरै समय पछी आज केही लेख्दैछु । समय कत्तिको उपयूक्त हो थाहा छैन । हाम्रो परिवारका लागी व्यक्तिगत रुपमा यो बर्ष सु खद रहेन । हुन त देश, राज्य र ब्रम्हाण्डलाई नै सुखद नरहेको हाम्रा लागि मात्र कसरी अनुकुल हुन सक्थ्यो र ! कुरा अब वर्त मान को गरौ । सामाजिक संजालहरुमा मेरो उपस्थिती लामै समय देखि छ ।
आफ्ना निजी कुराहरु अनि समसामयिक बिषयमा हल्काफूल्का टिप्पणी, व्यंग आदीका माध्यमबाट । यसलाई म आफैले कहि ल्यै आफ्नो पेशासंग जोडने प्रयास गरिन । तर आज पहिलो पट क मैले व्यावशायिक पाटो उप्काउदै छु । सरकारी सेवामा कार्य रत मैले यसपटकको बढुवामा आफ्नो नाम नपर्दा गरेका
उजुरी बारे लगभग सबैजसो नाम चलेका पत्रपत्रिका र अन लाइ नहरुमा आए । समाचारमा आएका कतिपय कुराहरु तथ्य गत थिए भने कतिपय अनुमानित । तर सन्तोषको कुरा के रह्यो भने विना प्रभाव पनि सकारात्मक समाचार आउदा रहेछन भन्ने मेरो निजी धारणाको विकास भयो
मेरो उजुरी रोक्न “यो किन ?” र “के का लागि ?” भनेर आ ग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रह मिश्रीत प्रश्नहरु तेर्सिए, अझ कतिपय त आजपर्यन्त भेट नभएका सुत्रहरु ले समेत भेटने प्रयास गरे । २९+ बर्षको सेवा पछी स्वत: प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफलबाट बिमुख भएका म जस्ता संग भ’विष्यमा आउन सक्ने
“अवसर”को बारेमा बिमर्श गर्दै गर्दा त एकछिनका लागि नि’कै ठु’लै मानिस पो भईएछ कि भनेर भ्र’ममा रमाईयो पनि । अर्को तिर “खै कुन्नि के के लगाएर” ठेगान लगाईदिने सम्मको कुरा समेत आए । मेरो उजुरी कर्मचारी जिवनको एउटा सामान्य प्र क्रिया हो त्यसैले म यसलाई “ग्लोरिफाई” गरेर “लडाई” भन्ने पक्षमा छैन ।
यो कुनै व्यक्ति वा संस्था वा सरकार लक्षित बि’रोध पनि होईन, हुन सक्दैन । बरु यसक्रममा मलाई न्याय दिन प्रयास गर्ने सह्र दयीहरु प्रति आभारी छु, त्यसैले यसमा गरिने अतिरंजनामा प नि मेरो बिमति छ । यस बिच मलाई गोटी बनाएर खेल्न खोज्ने पात्रहरु पनि बग्रेल्ती भेटिए तर तिनका उत्तेजित गर्ने प्रयासह रुलाई सहज रुपमा अस्विकृत गरियो ।
तथापी यसलाई कसैले ग’लत रुपमा परिभाषित गर्छ र बु’झ्छ भने त्यसको जि’म्मेवारी मैले लिन सक्दिन । मेरो जि’किर केव ल आफूले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने मात्र हो । अनि यो उ’जुरी अ हिले नै किन ? यसभन्दा अघि पनि त मौका थियो नि त ? भन्ने प्रश्नहरु पनि नते’र्सिएका हैनन ।
यसका लागि “रातो कार्ड” दिएर बाकि खेल हेर्न त के मैदान मै बस्न नदिने जस्ता “नियम र रेफ्री”को व्यवस्था गरिएको बारे “बै शाख १९” पछी बिवे’चना गरौंला । अहिलेलाई सेवाकालको उत्तरार्द्ध’मा गु’माउनु केही नरहेपछीको क’दम मात्र हो यो भन्ने मेरो बुझाई हो ।
मैले केही दिन अघि ट्विटरमा एउटा ओपिनियन पोल गरेको थि ए, “अन्तिम आशा त न्यायालय कै रह्यो, हेरौ ! जाम कि नजाम ?” थोरै फलोवरका बावजुद ८३% ले जानुपर्छ भनेकाले पनि म लाई नि’र्णय’मा पुग्न नैतिक बल पुग्यो । तर न्यायालय पुग्नु अ घिको बि’धमान नियम र कार्यविधिको ज’टिलता’लाई पनि पार गर्नै पर्ने बाध्यता रहेछ ।
मलाई थाहा छ, न’कारात्मकताउ’न्मुख हाम्रो परिवेशमा धेरैले मेरा कुरालाई “फ्रस्ट्रेसन” वा “कुण्ठा”को रुपमा तामेली गर्ने देखी “खलनायक”को रुपमा चि’त्रण गर्न पनि पछी पर्ने छैनन । अनि कसै कसैले त्यो भन्दा एककदम अघि बढेर “प्रतिशोध” लिन सक्ने सम्भावना पनि त्य’त्तिकै देख्दैछु । तर केही छैन !
आउदो पुस्ताको वृत्तिविकासमा कलम चोप्ने क्रममा “फलानोले जस्तो गर्छन कि…!” भनेर यो प्रकरणले चिरनिन्द्रामा म’स्त “विवेक”लाई झ’स्काउने सम्मको काम गर्छ कि भन्ने “सपना” देखेको छु ।
अन्तमा, बिषयवस्तुले आज न्यायालय प्रवेश गरेकाले यसको निर्क्यौल नहुन्जेल अब उप्रान्त म यस बिषयमा सार्वजनिक टि’प्पणी गर्ने छैन । 🙏
२०७८ चैत्र १८, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 963 Views